Tag: ee | Sagal Radio Services
Abaalmarinta Nobel Peace Prize oo ay ku guuleysteen labo ruux oo u ololeeya ka hortagga Kufsiga
Sagal Radio Services • News Report • October 5, 2018
Abaalmarinta Nabada ee Nobel Peace Prize ee 2018 ayaa waxaa si wadajir ah sanadkan ugu guuleystey labo ruux oo u ololeeya ka hortagga kufsiga Nadia Murad iyo Denis Mukwege.
Warbixin uu ka soo saaray Dalka Soomaaliya Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya 2017
Dadka Soomaaliyeed waxaa heysta qaar kamid ah xaaladaha noloeed ee ugu adag adduunka. Malaayiin ayaa dadaal ugu jirta sidii ay ula qabsan lahaayeen cawaaqibkii ka dhashay abaarta.
Qunsulkii guud ee Jeddah oo isku badalay sarkaal hab maamuuska Madaxweynaha
Xilli la diyaarinayo xafladda xilwareejinta Madaxweynaha, ayaa waxaa la arkayaa Qunsulka guud ee Soomaaliya ee Magaalada Jeddah ee Boqortooyada Saudi Arabia uu u shaqeynayo sida sarkaal hab maamuus.
Doorashada guddoonka aqalka sare oo maanta ka dhaceysa magaalada Muqdisho
Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho, gaar ahaan Xarunta Aqalka Sare, ay ka dhacdo Doorashada Guddoonka.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo warqadihii aqoonsiga ka guddoomaya Safiirka Sacudi Carabiya
Sagal Radio Services • News Report • January 18, 2017
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa warqadaha aqoonsiga safiirnimo ka guddoomay danjiraha cusub ee Boqortooyada Sacuudiga u soo magcaabdey Soomaaliya.
Bannaanbax lagu muujinayo midnimada bulshada oo ka dhacay St Cloud MN Mareykanka
Waxaa shalay Sebtidii ka dhacay magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka bannaan bax.
Maxkamadda Cadaaladda ee Hague oo maanta dhageysatay Kenya (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • September 19, 2016
Maxkamadda Caalamiga ee Cadaaladda (ICJ) ee magaalada Hague ayaa maanta si rasmi ah uga bilaabatay dhageysiga dacwada Badda ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya.
Xoghayihii Hore ee QM Boutros-Ghali oo Maanta ku Geeriyooday Isbitaal ku yaalla Dalka MASAR
Xog-hayihii hore ee Qaramada Midoobay, Boutros Boutros-Ghali, ayaa maanta ku geeriyooday Magaalada Qaahira ee caasimada dalka Masar, sida uu sheegay Madaxa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Laacibka Yaya Toure oo helay abaal-marinta BBC ee Cayaaryahanka Afrika 2015-ka (SAWIRRO)
Laacibka Yaya Toure ayaa ku guulaystay in uu noqdo Cayaar-yahanka Kubadda Cagta Afrika ee sanadka 2015 ee BBC ay bixiso. Cayaaryahanka 32 jirka qadka dhexe uga cayaara xulka qaranka Ivory Coast, wuxuu noqonayaa cayaar-yahankii sadexaad, waxaa ka horeeyay oo kaliya Nwankwo Kanu iyo Jay-Jay Okocha, oo midkiiba uu laba jeer helay abaalmarinta.
Wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya oo gaaray Gaalkacyo
Wakiilka Midowga Yurub ee Soomaaliya u qaabilsan Soomaaliya Michele Cervone D’urso ayaa maanta gaaray magaalada Gaalkacyo, si uu uga qeyb qaato dadaalada nabadeed ee lagu xalinayo xiisada dagaal ee wali ka jirta magaalada.
Sagal Radio Services • News Report • October 25, 2015
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho, warqadaha aqoonsiga kaga guddoomay Danjiraha cusub ee Boqortooyada Netherlands wakiilka uga noqon doona Soomaaliya, Amb. Franciscus Albercht Makken.
Taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka oo lagu hordhaariyay Madaxweynaha (Sawiro)
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta hortiisa lagu dhaariyey Taliyaha Cusub ee Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed S/Gaas Maxamed Aadan Axmed iyo Abaanduulaha Cusub ee Ciidammada Xoogga Dalka, S/Guuto Cali Baashi Maxamed Xaaji Cumar.
Safaarada Britain ee dalka Iran oo dib loo furay kadib muddo 4 sano ah oo ay xirneyd
Safaarada Britain ee magaalada Tehran caasimada dalka Iran ayaa dib loo furay maanta kadib markii ay xirneyd muddo ku dhow afar sano iyadoo labada dal ay ka heshiiyeen khilaaf hore u soo kala dhex galay.
Akhriso: Go’aan ka soo baxay Guddoonka sare ee Golaha Baarlamaanka Soomaaliya
Guddoonka Baarlamaanka Soomaaliya goor dhow soo saaray go’aan ku saabsan ka soo saaray arrimaha doorashada 2016, iyadoo Guddoonka qodobo lagama maarmaan ah oo ku aadan dastuurka.
Safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay Turkiga oo sagootin loo sameeyay (Sawirro)
Safiirkii Soomaaliya u fadhiyay dalka Turkiga Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa sagootin loo sameeyay, kadib markii dhowaan la bedelay, waxaana Safiirka la guddoonsiiyay hadiyado.
Ra’iisal Wasaarihii hore ee Talyaaniga Silvio Berlosconi oo lagu xukumay saddex sano oo xarig ah
Ra’iisal wasaarihii hore ee dalka Talyaaniga Silvio Berlusconi ayaa lagu xukumay saddex sano oo xabsi ah kadib markii ay maxkamad ku taal Naples ku heshay dambi ah laaluush inuu siiyay xubin ka tirsan xisbi ka soo horjeeda xisbiga Berlusconi.
Xildhibaanada Baarlamaanka oo loogu baaqay inay dhistaan Xarunta Golaha Shacabka
Sagal Radio Services • News Report • May 3, 2015
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa loogu baaqay inay dhistaan Xarunta Golaha shacabka oo ka mid aheyd xarumihii ku bur buray dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay.
Wasiirkii hore ee Difaaca oo ku baaqay in wadooyinka muhiimka ee Muqdisho lagu xiro kaamirada CCTV
Sagal Radio Services • News Report • March 13, 2015
Wasiirkii hore ee Difaaca Soomaaliya C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi ayaa ugu baaqay Madaxda dowladda inay la xisaabtamaan saraakiisha ammaanka, si looga hortago weerarada, loona xaqiijiyo Amniga.
Iyadoo uu socday kulamo xal loogu raadinayay kala aragti duwanaanshaha Xildhibaanada Baarlamaanka iyo nidaam darada soo wajahday kulamadii baarlamaanka, kadib markii saddexdii kulan ee u dambeeyay uu hareeyay buuq iyo fowdo ayaa waxaa lagu wadaa in maalinta berri mar kale uu dib u furmo kulankii Baarlamaanka.
Al-Shabaab oo mar kale ku hanjabay inay kordhin doonaan weerarada inta lagu guda jiro bisha Ramadaan
Sagal Radio Services • News Report • June 29, 2014
Wakiilka Al-Shabaab u qaabilsan Gobolka Banaadir Sheekh Cali Maxamed Xuseen ayaa sheegay in howl galada Muqdisho ay xoojin doonaan inta lagu guda jiro bisha Ramadaan.
Safaarada Somalia ee Belgium oo dayactir lagu billaabay
Safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Belgium oo tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya aan helin wax dayactir ah ayaa haatan waxaa lagu billaabay dayactir dib loogu habeynayo.
Dhageyso+Sawiro:Madaxda dowladda oo ka qeyb galay kulan Golaha Wasiirada uga hadlayaan qorshaha sanadka 2014
Sagal Radio Services • Audio/News Report • January 27, 2014
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa maanta furay kulan howleed labo cisho socon doona kaasoo Golaha Wasiirada ee Xukuumada si gaar ah uga wadatashan doonaan howlaha baaxada leh ee horyaala iyo sidii loogu fulin lahaa muhiimadaha ay kala leeyihiin, gaar ahaana qorshaha sanadka 2014-ka.
Wafdi Dowladda U Metelaya Wadahadallada Dowladda Federaalka Iyo Maamulka Somaliland Oo Saaka Ka Ambabaxay Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • January 15, 2014
Wafdi ka socda dowlada Federaalka Soomaaliya oo ka qeybgalaya wada hadallada u dhaxeeya Dowlada Federaalka iyo maamulka Somaliland ayaa saaka ka ambabaxy Muqdisho.
Faah Faahin Ku Saabsan Qaraxyadii xalay ka dhacay Afaafka Hore ee Hotel Jazeera
Fiidnimadii hore ee xalay Ciidammada Qalabka Sida ee Soomaaliyeed ayaa fashiliyey weerar argigixisonimo oo ay Maleeshiyada kooxda argigixisada ah ee Al-Shabaab ku damacsanaayeen iney kusoo qaadaan hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho ayadoo faah faahin dheeraad ah ay kasoo baxeyso qaabka ay qaraxyadaasi u dhaceen.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay oo codsaday in ciidanka AMSIOM la kordhiyo lana xoojiyo dagaalka Al-shabaab.
Xogyahaha guud ee Qaramada Midoobay, Ban Ki-Moon ayaa warqad uu u diray xubnaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midooaby wuxuu ku sheegay in loo baahan yahay in kumannaan ciidammo ah oo ka socda Afrika lagu xoojiyo ciidamada AMISOM si looga hortagao khataraha ka imaan kara Al-shabaab oo uu sheegay inay dib isku habeynayaan.
Dhagayso Waraka Axadnimo ee Radio Sagal
Sagal Radio Services • News Feature • July 14, 2013
Warka Axadnimo Ee Radio Sagal
Ra'iisul Wasaare Saacid iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Baydhabo
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee Gobolka Bay, iyadoo socdaalkiisa ay qeyb ka tahay booqasho uu horay ugu tagay qaar ka mid ah gobolada dalka.
Dhagayso Warka Axadnimo Ee Radio Sagal
Sagal Radio Services • News Feature • July 7, 2013
Sagal Radio Services • News Feature • June 30, 2013